Musharax Farmaajo oo Jeediyay Khudbad soo Jiidatay Shacabka Soomaaliyeed
Home / Musharax Farmaajo oo Jeediyay Khudbad soo Jiidatay Shacabka Soomaaliyeed
Guddoonka labada gole; Mudane Maxamed Sh. Cisman “Jawaari” iyo Mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo ku xigeennadooda, Guddiga labada gole ee doorashada Madaxweynaha, xildhibaanada sharafta leh, taliyayaasha ciidamada, goobjoogayaasha caalamiga ah, warbaahinta, martida kale ee halkaan fadhida iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee sida tooska ah igala socota warbaahinta kala duwan waxaan idinku slaamayaa ASC, WRX, WBRK.
Xubanaha Barlamaanka Labada gole waxaan marka koowaad idiinku hambalyeynayaa kalsoonida ay idin siiyeen shacabka Soomaaliyeed, waxaana Alle idiinkaga baryayaa inuu idiin fududeeyo xilka weyn ee aad ummadda Soomaaliyeed u qaaddeen.
MUDANAAYAAL IYO MARWOOYIN
Sharaf weyn ayay ii tahay inaan maanta labada gole iyo marti sharafta kale ee halkaan isugu timid ka hor caddeeyo sababta aan isugu soo sharaxay hoggaanka sare ee dalka afarta sano ee soo socota iyo halka aan doonayo inaan dalka iyo dadka u geeddi geliyo marka aad codkiina i siisaan.
Sidoo kale, waxaan maanta hortiina ka cadeynayaa qaabka aan u wajahayo dhibaatooyinka baahsan ee dalka ka jira si aad iigula xisaabtantaan berrito.
Dalku wuxuu ku jiraa xaalad adag, waxaanna jira:
	Amni darro baahsan
	Ciidankii qaranka oo aan daryeel ku filan haysan.
	Nidaamkii dhaqaalaha dalka oo burburay.
	Caddaalad darro iyo musuqmaasuq baahsan oo hareeyey hay'adihii dawladda.
	Musiibooyin dabiici ah sida abaaro iyo fatahaado soo noqnoqda oo aysan dowlad wax ka qabata jirin.
	Barakac joogto ah.
	Da’yartii Soomaaliyeed oo dalkoodii ka cararaya, iyo in kuwii soo noqon lahaa ay ku soo dhiiran waayey dalkoodii hooyo.
Waxaa intaa ka sii daran oo aad markhaati ka tihiin in masiirkii dalka iyo dadkuba ay khatar weyn ku jiraan, taas oo ay sabab u tahay xukuumadda oo gabtay mas’uuliyaddeedii .......qaranimo....... tii umadnimo iyo tii waddaninimaba...............
Dib-u-hanashada qarannimadeenna, iyo sharafta iyo karaamada ummadeed intuba waa waajib saaran golayaasha dastuuriga ah.
	Ma'ahan in shacabkeenu naga rajo dhigo !
	Ma'ahan in caalamku nagu wiirsado !
	Mana ahan inaan baahideenna dhaaqaale iyo mida amni ku fillaan weyno !
Si aynnu dhibaatada dalka ee inagu daba dheeraatay aynnu wax uga qabanno waxaynnu u baahannahay isbdel dhab ah.............
Isbedelka aynnu doonayno maaha in qof qof kale lagu bedelo ama xukuumad xukuumad kale lagu bedelo, Isbedelka aynnu u baahannahay waa in aynnu beddelno hab-dhaqanka siyaasadeed ee xun ee soo noqnoqday:
	Waa in aynnu bedelno hab-dhaqanka siyaasadeed ee marka doorashada la gaadho caanka noqotay ee ah "dawlad baa i wadata oo dadka ii jujuubaysa".
	Waxaynnu beddelaynaa dhaqankii siyaasadeed ee ahaa in shacabku aysan dowladda wada shaqayn la lahayn.
	Waxaynnu beddelaynaa hab-dhaqankii caadada laga dhigtay ee ahaa in barlamaanka la xiro, shaqadiisana la joojiyo sanadka ugu dambeeya ee doorashadu soo dhowaato.
	Hab-dhaqankii siyaasadeed ee ahaa in mushaarka ciidamada, shaqaalaha dowladda iyo kan barlamaanka aan loo arag xuquuq ay leeyihiin ee loo arko hadiyad markay doonto madaxdu bixiso.
	Waxaynnu beddelaynaa dhaqankii siyaasadeed ee malaayiin doolar oo dalka iyo dadkuba baahi weyn u qabaan lagu baabi'iyo mooshin dawlad lagu ridayo ama mid lagu dhisayo.
	Waxaynnu beddelaynaa dhaqankii siyaasadeed ee madaxda dowladdu caado ka dhigteen in ay safar ku dhammeeyaan waqtigii iyo hantidii qaranka.
	Waxaynu beddelaynaa dhaqan siyaasadeedkii ahaa in aan xil la iska saarin nolosha iyo amniga xildhibaannada ee keliya la xusuusta maalinta mooshin loo baahanyahay ama loo tacsiyeeyo maalinta la dilo.
	Waxaynnu beddelaynaa in amnigeenna cid kale inooga masuul noqoto.
	Waxaynnu beddelaynaa hab-dhaqankii ahaa in dowladdu awooddeeda ku cuburiso shacabkeeda halkii ay ugu adeegi lahayd.
Haddaba, Si aan u dhisno dowlad gudata waajibkeeda, una xaqiijin lahayn himilooyinkeenna qaran, waxaan idinka codsanayaa inaad I siisaan codkiinna si aan hormuud uga noqdo qabashada hawshaas muqadaska ah ee ina hortaalla.......... Jahaynta masiirka ummadeennu gacantiina ayuu maanta ku jiraa, waxaanan ku kalsoonahay inaad si wada jir ah go’aan loo aayo u qaadan doontaan.
Dhankayga waxaan ballan qaadayaa inaan kasoo dhalaalo dhammaan waajibaadkayga dastuuriga ah oo ay ugu horeyso inaan soo magacaabo R/W soo dhisa xukuumad si buuxda ula shaqeysa gollayaasha dastuuriga ah......... xukuumad ka fog musuqmaasuq iyo laaluush.
Inta aanan wax idiinkaga sheegin barnaamijkayga siyaasadeed ee NABAD IYO NOLOL ee hortiinna yaalla, waxaan rabaa in aan wax yar idinka xusuusiyo ballamihii aan hadda ka hor qaaday markaan codsanayey kalsoonida xukuumaddii aan Raysal wasaaraha ka ahaa 2011 aniga oo ka soo qaadanaya kuwii ugu muhiimsanaa oo anigoo ALLE la kaashanaya aan sidaan u ballan qaaday u fuliyey:
1.	Xukuumaddii aan madaxdaka ahaa waxay 100 maalmood gudahood dib u habayn ku sameeysey ciidankii qaranka, waxaanan u dhammaystiray mushahaarkooda, tababarkooda iyo dhammaan daryeelkii ay dawladda xaqa ugu lahaayeen.
2.	Waxaan muddo yar gudaheed annaga oo Ilaahay kaashanayna aan magaalada Muqdisho ka saarnay nabad-diidkii oo markaas haystay 70% magalaada Muqdishu.
3.	Waxaanu bilownay bixinta mushaharaadka ciidamada amniga, shaqaalaha dawladda, iyo kii barlamaankii xilligaas jiray.
4.	Waxaan dagaal adag la galnay musuqmaasuqa oo aan isbeddel ku sameeyey hay'adaha dhaqaalaha, waxaanan kordhiney dakhligii dawladda, taas oo ii suura gelisay in aan $7,500,000, ku xil wareejiyo R/W iga danbeeyey ayadoo markii aan la wareegay xilka uusan 1$ ku jirin khasnadda dowladda.
5.	Waxaan dib u hawl gelinney teleshanka qaranka markii ugu horraysey ilaa intii dawladdu burburtay.
Waxaan si taas lamid ah maanta hortiinna ka ballan qaadayaa in aan dhiso xukuumad fulisa arimaha ku xusan Barnaamij Siyaasadeedkayga NABAD IYO NOLOL oo isaga oo faahfaahsan aad ka heli doontaan buugga la idiin qaybiyey, waxaanse wax yar ka xusayaa qaybo ka mid ah: waxaan ballan qaadayaa:
1.	Dhisidda ciidan Soomaaliyeed oo awooda inuu hanto amniga dalkeena; lehna awood ciidan oo aan kaga kaaftoomi karro ciidamada shisheeye annaga oo u marayna qaab aan ku wada kalsoonaan karno oo cidana aysan u arkayn khatar iyaga ka dhan ah..........Inaan si sugan ugala wareegno masuuliyadda amniga dalkeena waa sida kaliya ee aan uga mahadcelin karro ciidamada AMISOM iyo inta kale ee na caawisayba. Waxaan suurto galinayaa maalintaas farxada iyo rayn raynta mudan inay dhacdo sida ugu dhaqsaha badan, uguna suurta galsan.
2.	Waxaan ballan qaadayaa Cirib tirka nabad-diidka noocuu doonaba ha ahadee, aniga oo kula dhaqmaya siyaasad saddex nooc ah:
a.	In aan soo dhoweeyo inta ku qanacsan in ay dib uga laabtaan fikirada khaldan loona sameeyo dhaqan celin buuxda si ay nolosha dib ugu soo noqdaan.
b.	In aan la dagaalamo inta ku sii dheggan fikradaha khaldan ee ay bulshada Soomaaliyeed ku baabi'inayaan
c.	Iyo inaan ka hortago wax allaale iyo wixii keeni kara inay dhallinyarada Soomaaliyeed u dhego nuglaato fikradda khaldan sida shaqo la’aanta, aqoon la’aanta iyo cadaalad darrada.
3.	Waxaan dhisaynaa hay'addii Qaran ee la dagaalanka musuqmaasuqa si adeegyada dawliga ah loo gaarsiiyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed.
4.	Waxaan muhiimad weyn siinayaa dib u heshisiin qaran oo bulshada Soomaaliyeed u dhantahay, si aynu innagoo midaysan u dhammaystiranno hawlaha dastuuriga ah ee ina horyaalla.
5.	Waxaan dhammaystirayaa wadahadaladii u dhexeeyey walaaleheenna Somaliland iyo dowladda dhexe, wadadhadaladaas oo ay qayb ka noqon doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada ee aan ku ekaan doonin koox gaara.
Waxaa yididiilo leh in maanta labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ay Somaliland ka soo galeen dhalinyaradii dawlad la'aanta ku hana qaaday, taasoo marag ma doonto u ah baahida loo qabo midnimada ummadda Soomaaliyeed, sidaa darteed, waxaan ballan qaadayaa in xildhibaannada ka soo jeeda goboladaas ay qayb lixaad leh ka qaadan doonaan wadahadallada gaar ahaan dhalinyaradu.
Nidaamka Federaalka ee aan qaadanay wuxuu u baahan yahay in si rasmi ah loo hirgaliyo. Hir-galinta ama dhaqan-galinta nidaamka federaalka ahi wuxuu ka bilaabinayaa dib-u eegista dastuurka ku-meel gaarka. Sidaas awgeed, Waxaa qorshayaashayda ugu waaweyn ka mid ah dhammaystirka dastuurka, iyo in afti buuxda loo qaado.
Dhinaca kale, caddaaladdu waa xariga kaliya ee mideyn kara, iskuna hayn kara ummaddeena. Waa miisaanka ugu weyn ee shacabkeena iyo ummadaha kalaba ku qiimanayaan dawladnimadeena. Waana hawsha ugu weyn ee dhisi karta kalsoonida shacabku ay ku qabaan dawladdooda.
Sidaas daraadeed, waxaa ii qorshaysan in aan dadaal qiro weyn galiyo sidaan dib ugu dhisi lahaa nidaamkii iyo hay'adihii garsoorka ee dalka. Waxaan hirgalinayaa nidaam caddaaladeed oo awood u leh in dambiiluhu uusan gabbaad ka dhigan qabiil ama fikir xagjir ah.
Waxaan sidoo kale siyaasad qoto dheer ka leeyahay sida aan ula macaamilayno caalamka intiisa, sida wadamada dariska ah, Afrikada kale, Caalamka Muslimka, dunida carabta iyo dunida inteeda kaleba. Siyaasaddayda arimaha dibaddu waxay noqonaysaa mid miisaaman oo dhex-dhexaad ah annaga oo raacanayna halka ay ku JIRTO DANTA DALKA IYO DADKA SOOMAALIYEED.
Waxaan xoojinaynaa doorkeenii aan ku lahayn urur goboleedka IGAD, iyo ururada kale ee caalamiga ah. Waxaan bilaabaynaa inaan bixino khidmadii xubinnimo ee aan mudada dheer ka baaqsanay taas oo na gaarsiinaysa inaan ururadaas ku yeelano cod buuxa iyo in aqoon yahanadeenu ka qeyb galaan hoggaanka sare ee ururadaas. Waxaan si qoto-dheer oo ka fiirsasho leh u maareynaynaa danta caalamku naga leeyahay iyo midda aan annagu ka leenahay caalamka dal ahaan si ay meesha uga baaxaan khaladaadka siyaasiga ah ee nasiib-darro beryahaan danbe dowladaheennu ku dhacayeen.
Waxaa ilaahay mahaddiis ah in maanta ay halkaan fadhiyaan sadex jiil oo kamid ah ummadda soomaaliyeed.
1) Waa jiilkii la jaanqaaday xorriyada, ee goobjoog u ahaa gobonimadii, xorriyaddii, iyo soo celintii sharaftii umadda Soomaaliyeed ay lahayd; ayagoo ka faa’iideysanaya waaya aragnimadooda, waxaa maanta jiilkaas saaran masuuliyad gaar ah sidii dib loogu soo celin lahaa qaranimadii Soomaaliyeed.
2) Jiilka labaad ee halkan maanta fadhiya, waa jiilkii wax ku bartay, kuna hana qaaday dowladnimada, isla markaasna dhidibada u aasay dowladnimadeenna, waa jiilkii dowladnimadeenna gaarsiiyey magacii iyo maamuuskii aan Afkira iyo dunida inteeda kale ku lahayn, una soo joogay qarankii soomaaliyeed oo laga haybaysto, qaybna ka ahaa dhaqdhaqaaqyadii iyo go’aanadii waaweynaa ee qaaradda Afkira iyo caalamkaba gaareen qarnigii labaatanaad kuwaas oo ay Soomaaliya qayb ka ahayd.
3) Jiilka saddexaad waa jiilkii ku hana qaaday burburkii iyo qaran jabkii dawladda Soomaaliyeed, waxayna u badanyihiin barlamaanka cusub, waana markii koowaad ee saameyn ay ku yeeshaan talada siyaasadeed iyo masiirka umadda Soomaaliyeed.
Waxaa xusid mudan in Guddoomiyaha Golaha Shacabka Mudane Maxamed Sh. Cismaan Jawaari uu isagoo dhalinyarada soomaaliyeed lahadlaya ku yiri hadal taariikhda galay, wuxuuna ku yiri, “haddaan nahay jiilkeenna, waxa kaliya ee aan idiin wadno maanta, waa inaan idin dhaho, "NAGA RAALI AHAADA”, waayo idiinma aanaan diyaarin, wixii ay jiilkii annaga naga horreeyey noo diyaariyeen", anigoo oo ku waafaqsan guddoomiyaha cudur daarka uu bixiyey, waxaan si gaara ugula dardaarmayaa xildhibaanada dhalinyarada ah in aad maanta haysataan fursaddii aad jiilka idinka dambeeya ugu diyaarin lahaydeen mustaqbal ay idinku mahadiyaan.
Shalay markii aad jaamacadaha dhiganayseen, ama aad noloshiina ku mashquulsanaydeen, waxaad oran jirteen; Maxay siyaasiyiinta Soomaaliyeed u gaari la’yihiin go’aan dalka anfaca; maanta adinka ayaa haysta qalinkii dalka lagu badbaadin lahaa, haddaba xusuusnoow, inaad maanta gaarayso go'aan saameyn ku yeelan doona mustaqbalka dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto. Sidaas awgeed, waxaan saddexda jiilba si wada jir ah uga codsanayaa inay codkooda isiiyaan si aan dib ugu soo celiyo qaranimadii iyo sharaftii Ummadda Soomaaliyeed lahayd.
Haweenka Soomaaliyeed ee ka mid ah baarlamaanka waxay maanta heleen tiradii ugu badnayd taariikhda ee ka mid noqota hoggaanka siyaasadda qaranka taasoo ah arin dhiirigelin mudan. Sidaad la socotaan dhibaatada dalka ku habsatay waxaa culayskeeda ugu weyni ku dhacay hooyada Soomaaliyeed.
Nasiib darro, Soomaliya waxay noqotay meesha dunida ugu xun ee hooyo ay ku dhasho,
•	Qiyaastii 6% ayaa dumarka Soomaaliyeed dhimata inta ay uurka leeyihiin.
•	Hooyada Soomaaliyeed ayada ayaa maanta qaxaysa.
•	Ayada ayaa ilmaheedii badaha ku dhammaanayaan,
•	Ayada ayaa haddana masuuliyaddii nolosha qoyskii Soomaaliyeed dusha saaratay inta badan.
Sidaa awgeed hooyada Soomaaliyeed waxay xaq u leedahay in ay hesho hoggaan wanaagsan iyo dawlad daryeesha ayada iyo ubadkeedaba. In la helo dowlad Soomaaliyeed oo qaadata mas’uulayadda ka saaran Hooyada iyo dhallaanka waxay si siman u wada saaran tahay dhammaan xubnaha barlamaanka ee maanta halkan fadhiya rag iyo dumarba, laakiin waxaa dhibaataada hooyada Soomaaliyeed si gaar ah u dareemi kara 78da xildhibaan ee haweenka ah ee maanta halkaan fadhiya, sidaas awgeed waxaan si gaara uga codsanayaa inay codkooda i siiyaan si aan uga shaqeeyo wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta hooyada iyo dhallaanka Soomaaliyeed.
Waxaan mar kale idin xasuusinayaa hadal aan ku iri mudanayaashii golaha shacbka sanadkii 2012kii kaas oo ahaa in 10ka bisha oo isniin ahayd go'aanka ay gaari doonaan aysan dib usoo celin karin maalinta xigta ee Talaadada ah. Go'aankii uu baarlamaanku maalintaas gaaray dib u dhicii ka dhashay marqaati baad ka tihiin ----- askariga banaanka taagan ee idin waardiyeynaya bal warsada inta bilood ee uusan xuquuqdiisa helin; xildhibaanada cusub ha warsadeen xildhibaanadii ka horeeyey, iska daa daryeel kalee inta bilood oo aysan mushahaar qaadan; inta xildhibaan ee dayac u dhimatay; ummadda inteeda kalana warkoodaba daa.
Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo intii naftooda u hurtay badbaadinta umadda Soomaaliyeed gaar ahaan xildhibaanadii, ciidamadii, iyo hawl wadeenadii dawladda....aamiin, adinkuna aamiin ila dhaha… Maantana waxaan idin oranayaa 8da bishan oo Arabco ah go'aanka aad qaadataan masoo celin kartaan 9ka bisha oo Khamiis ah.
Anigu waxaan doonayaa inaan hogaamiyo dawladii wax ka qaban lahayd dhammaan dhibaatooyinka aan kor kusoo xusay, ayadoo kaalmaysanaysa laba gole ee sharci dejinta. Waxaan doonayaa inaan hogaamiyo dawlad og duruufihii adkaa iyo dayicii xildhibaanadeenu ku soo shaqeeyeen, garowsanna waajibka ka saaran dhawrista sharafta iyo amniga sharci dajiyeyaasha. Dawlad leh aragtidii dib loogu soo celin lahaa amniga dalka iyo dadka......
Waxaan ugu danbayntii si xushmadi leh idiinkaga codsanayaa mar koowaad iyo mar labaadba in aad codkiinna i siisaan. Waxaan ahay Soomaali aysan dowlad kale dabada ka riixayn, idinkuna waxaad tihiin xildhibaanadii qaranka Soomaaliyeed.......... Soomaaliyana Soomaali baa leh.
Waxaan shacab weynaha Soomaaliyeed meel ay joogaanba ka codsanayaa in aynnu Ilaahay ka barinno sidii dalkeenna hooyo ku noqon lahaa dal nabad ah, horumarsan, dadkiisuna barwaaqo iyo sharaf ku noolyihiin iyo in Ilaaahay abaarta iyo colaadda inaga dul qaado isaga awoodda lehe. Aamiin.